Tag: nzaghachi ahịa | Martech Zone
Tag: nzaghachi ahia
Enwere ezigbo ọkụ mgbe m kwalitere iji igwe mmadụ. Ndị nọ n'ime imewe ndị m na-asọpụrụ nke ukwuu ọ bụ ezie na ọ bụ ntakịrị ihu abụọ iji nwee ekele maka ìgwè mmadụ na-atụgharị uche na sistemụ ndị ọzọ dị ka 99designs, ebe ha na-akwado igha ụlọ ọrụ nhazi. Ekwetaghị m na ọ bụ otu ma ọ bụ nke ọzọ, enwere m ekele maka ha abụọ! M aka a di na nwunye nke Mba! Spec na-akwado na-abịa na ụfọdụ ndụmọdụ: Olee otú azụmahịa ịmalite inwe oké